एक बच्चा स्वस्थ विकास र विकासका लागि आवश्यक पदार्थ प्राप्त जो देखि स्तन दूध, संग खुवाउनुभयो हुन्छ, आमा ठूलो जिम्मेवारी आफ्नो आहार आउन गर्नुपर्छ। उनको शरीर मा पतन कुनै पनि उत्पादन, आफ्नो बच्चाहरु को स्वास्थ्य असर गर्छ। भर्खरै बनाएको आमाको पहिलो बच्चा भने, तुरुन्तै धेरै प्रश्न उठ्छ: सुत्केरी आमाले दूध, मह, र धेरै अन्य उत्पादनहरु संक्षिप्त गर्न सक्नुहुन्छ? , का हेर्न स्तनपान गर्दा मेनु के हुनुपर्छ गरौं।
सबै को पहिलो, तपाईंले खाना को मात्रा ध्यान गर्न आवश्यक छ। अक्सर आमा नातेदार त्यो दुई को लागि खाने थियो जिद्दी, मानिन्छ अब त्यो, आफू लागि मात्र खुवाउन तर suffice गर्न र बच्चा छ। वास्तवमा, एक महिलाको शरीर त कुशलतापूर्वक यो lactation कायम गर्न क्यालोरी को सेवन वृद्धि गर्न आवश्यक छैन भनेर काम गर्दछ। त्यो भोक महसुस गर्दा पर्याप्त खाना लिन आमा। महिला र उनको गतिविधिका वजन आधारमा एक व्यक्ति सूचकांक - कति क्यालोरी उनको शरीर मा प्राप्त गर्नुपर्छ। यदि भोक समस्या छन्, यो psycho-भावनात्मक राज्य कारण हुन सक्छ, र त्यसपछि, सायद, यो आवश्यक व्यावसायिक मद्दत गर्न रिसोर्ट छ।
के म सुत्केरी आमाले खान सक्नुहुन्छ? यस प्रश्नको कुनै एकल जवाफ छ। नियम, त्यहाँ भन्दा सांस्कृतिक परम्परा प्ले ठूलो भूमिका छ वैज्ञानिक तथ्य। विभिन्न देशहरूमा, स्तनपान छन् जो महिलाहरु को लागि पोषण सिफारिसहरू, मौलिक फरक हुन सक्छ। केही खाद्य पदार्थ हुन सक्छ आंतों colic को बच्चा मा, तर के उत्पादनहरु - विशुद्ध व्यक्तिगत कुरा। तपाईं कि बेचैन पछि बच्चा पाइहाल्छन् नोटिस भने, आफ्नो आहार निश्चित खाद्य पदार्थ हटाउन सक्नुहुन्छ, र त्यहाँ कुनै पनि परिवर्तन हुनेछ कि हेर्नुहोस्। एलर्जी भोगिरहेका छ जो एक परिवार भने, यो सान्दर्भिक उत्पादनहरु निकाल्न सम्भव छ, तर यो आवश्यक छैन - यो एलर्जी बच्चा हस्तान्तरण गरिने छैन भन्ने तथ्यलाई।
मासु वा माछा, अनाज, फल र तरकारी, दुग्ध उत्पादन, पनीर, घरेलु पनिर, अन्डा, वनस्पति तेल र घिउ, रस, nectars, पास्ता र रोटी: कुनै पनि मामला मा, मेनु नर्सिङ आमा निम्न उत्पादनहरु समावेश गर्नुपर्छ।
सामान्यतया नर्सिङ आमा ठूलो परिमाणमा मिठाई contraindicated छ। तर एक स्तनपान आमा दूध संक्षिप्त गर्न सक्नुहुन्छ? निस्सन्देह, तपाईंले 1-2 चम्मच खान भने, यो चोट छैन, लामो यो उच्च गुणवत्ता र ताजा छ रूपमा। यसबाहेक, संक्षिप्त दूध दूध प्रोटिन र क्याल्सियम, पनि उपयोगी, फेरि यो उत्पादन बनाउँछ जो तपाईं ठिक्क यसलाई खान भने यथावत् छ।
सुत्केरी आमा दूध संक्षिप्त कि को प्रश्नको जवाफ, विचार र डाक्टर सुन्न पर्छ। तिनीहरूलाई थुप्रै रूपमा, मा स्तन-खुवाउने आमा यसको प्रयोग निषेध गाढा दूध मा बच्चा आवश्यकता छैन कि चीनी को धेरै छन्। कि एक विश्वास गर्ने गाढा दूध जब चिया थपियो दूध उत्पादन बढावा, गलत छ। त्यहाँ मद्दत वृद्धि दूध आपूर्ति धेरै अन्य उत्पादनहरू हुन्। यी विशेष चाय, भिटामिन र खनिज संग नर्सिङ आमा को लागि रस समावेश गर्नुहोस्।
तर, यो स्वादिष्ट, तर रूपमा उपयोगी उत्पादन भूल सक्दैन छैन, र सुत्केरी आमाले दूध संक्षिप्त कि प्रश्न द्वारा सास्ती हरेक दिन छ भने, तपाईंले कम्तिमा पहिलो तीन महिनामा यसको सेवन सीमित गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। र त्यसपछि गर्दा बच्चाको प्रतिक्रिया ध्यान दिएर हेर्दै, आहार मा बिस्तारै शुरू। तर यो भएकोले गाढा दूध मा मुछिन छैन राम्रो छ बच्चाहरु को स्वास्थ्य आफ्नो आमा के खाने सिधै निर्भर गर्दछ।
गर्भावस्था को 28th हप्ता। बच्चाहरु को विकास र आमाको अवस्था
Nikolai Godovikov: जीवनी, फोटो, Filmography
फिल्म "यूरी गरेको प्रारम्भ": अभिनेता र भूमिकाको
अटलांटिक महासागर मा बुभेट द्वीप
शाकाहारी भोजन लागि जौ अचार नुस्खा संग खाना पकाउन कसरी
म श्रीमान्सँगै सुत्न चाहँदैनन्। म के उनको पति, संग घनिष्ठ सम्बन्ध चाहँदैनन्?
दास - जो यस्तो छ? प्राचीन रोम र मिश्र मा दास को कानूनी स्थिति
वातावरण को संरचना